Ungayisebenzisa kanjani i-ultrasonicators - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ungayisebenzisa kanjani i-ultrasonicators"
Ama-Ultrasonicators ngamadivayisi we-probe-hlobo we-ultrasonic, asetshenziselwa izinhlelo eziningi kubandakanya i-homogenization, ukusabalalisa, ukusakaza okumanzi, i-emulsation, isizinda, i-lysis, disintegration, kanye nokuphendula kwamakhemikhali.
Isimiso esisebenzayo se-ultrasonicator sisuselwa kumbandela we-acoustic cavitation. Lapho amagagasi amakhulu e-ultrasound ehlanganiswa abe ngumjikelezo owuketshezi, kushintshana imijikelezo ephezulu kakhulu / yomfutho ophansi udabula uketshezi. Ngesikhathi semijikelezo yengcindezi ephansi, amaza e-ultrasonic adala ama-bubucu we-vacuum we-minuscule, akhula ngaphezu kwemijikelezo yokucindezela eminingana. Lapho ama-bubu we-vacuum efinyelela ivolumu lapho engeke akwazi ukudonsa khona amandla athile, afaka ngobudlova ngesikhathi somjikelezo onomfutho ophakeme. Kafushane, i-cavitation ukukhula nokuwohloka kwamabhamuza we-vacuum noma imigodi. Ngenkathi i-bubble implosion, insimu enamandla amakhulu yakhiwe. Ensimini ye-acoustic cavitation, izimo zimbi kakhulu – kufaka phakathi okushisa okuphezulu kakhulu nokuhluka kwengcindezi, izixakaxaka, amabutho e-shear kanye namajethi kagesi – kungalinganiswa. Lawa mandla amakhulu asetshenziselwa ukufeza izinhlelo eziningi ezishiwo ngenhla.
Ama-Ultrasonicators adala i-cavitation ukuyisebenzisa ngenhloso ezinsizeni, ku-slurries nakugesi ukuze kufezekiswe ukuncishiswa kosayizi, ukuxubaniswa kwezigaba zika-oyili / zamanzi, ukuphazamiseka kweseli noma ukuthonya ngokuphendula kwamakhemikhali.
I-Sonication (nayo i-ultrasonication) ichaza inqubo yokusebenzisa amandla e-ultrasound kwewuketshezi noma esitsheni. Imiklamo ye-Hielscher Ultrasonics, yenza futhi isabalalise ukuphakama okukhulu, okuphezulu kwemvamisa ephakeme kakhulu kusuka kwelebhu & ibhentshi-phezulu kuya esikalini sezimboni ngokuphelele.
Funda kabanzi mayelana nama-ultrasonicators kanye nezicelo zawo!